လူ့နှလုံး ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန် နှလုံးတု ကို သိပ္ပံပညာရှင် များဖန်တီးထားမှုများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » လူ့နှလုံး ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန် နှလုံးတု ကို သိပ္ပံပညာရှင် များဖန်တီးထားမှုများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
လူ့နှလုံး ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန် နှလုံးတု ကို သိပ္ပံပညာရှင် များဖန်တီးထားမှုများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
လူ့နှလုံး နှင့် ပုံစံချင်းတူ၍ လူ့ နှလုံးသား အစစ်ကဲ့သို့ပင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန် နှလုံးတု ကို သုံးဖက်တိုင်း ပုံနှိပ်နည်းပညာဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်သုတေသန သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖန်တီးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပီတီအိုင် သတင်းဌာနက ယနေ့ရေးသား တင်ပြထားသည်။
လူ့နှလုံး အစစ်ကဲ့သို့ပင် နှလုံးတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် ဆီလီကွန် နှလုံးတု ဖြင့် နှလုံးရောဂါ သည် သန်းပေါင်းများစွာ၏ အသက်ကို ကယ်တင် ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အီးတီအိတ်ခ်ျ ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင် များက ပြောကြားသည
ဆွစ်ဇာလန် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ဆီလီကွန် နှလုံးတု သည် အလေးချိန် အားဖြင့် ၃၉ဝ ဂရမ်လေး၍ ထုထည်အားဖြင့် ၆၇၉ ကုဗစင်တီမီတာ ရှိကြောင်း ပီတီအိုင် သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆီလီကွန် နှလုံးတု သည် လူ့နှလုံးကဲ့သို့ပင် သွေးအဝင်အထွက် အခန်းနှစ်ခန်း ပါဝင်ပြီး ၎င်းအခန်းနှစ်ခန်းကို လူ့နှလုံးကဲ့သို့ Septum ခေါ် တစ်ရှူးနံရံဖြင့် မခြားထားဘဲ လေဟာနယ် အခန်းပိုတစ်ခုဖြင့် ခြားထားသည်။
အကယ်၍ ဆီလီကွန် နှလုံးတုနည်းပညာ အမှန်တကယ် အသုံးပြုခဲ့ပါက နှလုံးအစားထိုး ကုသရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် လူနာများ အသက်ဆက်ရှင် နိုင်ရေးအတွက် ဆီလီကွန် နှလုံးတုဖြင့် ထိန်းပေးထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ နှလုံးအစားထိုး ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်သော နှလုံးရောဂါ သည် ၂၆သန်းမျှ ထိရှိသော်လည်း လူနာအချိုးအစားနှင့် နှလုံးအလှူရှင် ရရှိသော အချိုးအစား မျှတမှုမရှိကြောင်း ဆေးပညာရှင်များ အဆိုအရသိရ
<<< Unicode ဖှငွ့ဖတရွနွ >>>
လူ့နှလုံး နှငွ့ ပုံစံခငွှးတူ၍ လူ့ နှလုံးသား အစစကွဲ့သို့ပငွ အလုပလွုပနွိုငသွော ဆီလီကှနွ နှလုံးတု ကို သုံးဖကတွိုငွး ပုံနှိပနွညွးပညာဖှငွ့ ဆှစဇွာလနသွုတသနေ သိပပြံပညာရှငမွှားက ဖနတွီးနိုငပွှီ ဖှစကွှောငွး ပီတီအိုငွ သတငွးဌာနက ယနရေ့ေးသား တငပွှထားသညွ။
လူ့နှလုံး အစစကွဲ့သို့ပငွ နှလုံးတာဝနမွှား ဆောငရွှကပွေးနိုငမွညွ့ ဆီလီကှနွ နှလုံးတု ဖှငွ့ နှလုံးရောဂါ သညွ သနွးပေါငွးမှားစှာ၏ အသကကွို ကယတွငွ ပေးနိုငမွညွ ဖှစကွှောငွး အီးတီအိတခွှ ဇူးရစတွကကြသိုလမွှ သိပပြံပညာရှငွ မှားက ပှောကှားသည
ဆှစဇွာလနွ သိပပြံပညာရှငမွှား၏ ဆီလီကှနွ နှလုံးတု သညွ အလေးခှိနွ အားဖှငွ့ ၃၉ဝ ဂရမလွေး၍ ထုထညအွားဖှငွ့ ၆၇၉ ကုဗစငတွီမီတာ ရှိကှောငွး ပီတီအိုငွ သတငွးဌာန၏ အဆိုအရ သိရသညွ။
အဆိုပါ ဆီလီကှနွ နှလုံးတု သညွ လူ့နှလုံးကဲ့သို့ပငွ သှေးအဝငအွထှကွ အခနွးနှစခွနွး ပါဝငပွှီး ၎င်းငျးငြးငွးအခနွးနှစခွနွးကို လူ့နှလုံးကဲ့သို့ Septum ခွေါ တစရွှူးနံရံဖှငွ့ မခှားထားဘဲ လဟောနယွ အခနွးပိုတစခွုဖှငွ့ ခှားထားသညွ။
လဖေိအားဖှငွ့ ကှုံ့နိုငွ ဆနွ့နိုငသွော ၎င်းငျးငြးငွးအခနွးပိုသညွ လူ့နှလုံး ကှကသွားမှားနရောတှငွ အစားထိုးဝငရွောကွ၍ သှေးအဝငွ အထှကခွနွးမှားမှ အရညမွှားကို စုပယွူပေးနိုငမွညွ ဖှစသွညွ။
အကယွ၍ ဆီလီကှနွ နှလုံးတုနညွးပညာ အမှနတွကယွ အသုံးပှုခဲ့ပါက နှလုံးအစားထိုး ကုသရနွ စောငွ့ဆိုငွးနသညွေ့ လူနာမှား အသကဆွကရွှငွ နိုငရွေးအတှကွ ဆီလီကှနွ နှလုံးတုဖှငွ့ ထိနွးပေးထားနိုငမွညွ ဖှစသွညွ။
ကမဘြာတစဝွနွးလုံး၌ နှလုံးအစားထိုး ကုသမှုခံယူရနွ လိုအပသွော နှလုံးရောဂါ သညွ ၂၆သနွးမှ ထိရှိသောလွညွး လူနာအခှိုးအစားနှငွ့ နှလုံးအလှူရှငွ ရရှိသော အခှိုးအစား မှတမှုမရှိကှောငွး ဆေးပညာရှငမွှား အဆိုအရသိရ